Landa ividiyo ye-YouTube bese ukhipha umsindo ngokuzenzakalela | Kusuka kuLinux
Landa ividiyo ye-YouTube bese ukhipha umsindo ngokuzenzekelayo
Besivele sikutshele ngakho youtube-dlIthuluzi elisebenzisa imiyalo esigungwini esivumela ukulanda amavidiyo ku-YouTube bese uwabuka ungaxhunyiwe ku-inthanethi, ngokukhululeka.
Kuyenzeka lokho ubhabha Esikhathini esithile esidlule wenza iskripthi esenza kahle lokho okushiwo yisihloko seposi:
Landa ividiyo ye-YouTube
Khipha umsindo kuleyo vidiyo
Ukuze iskripthi sisebenze udinga ukufaka youtube-dl:
Ku-ArchLinux noma okuphuma kokunye:
Manje siqhubekela phambili ukufaka i-ffmpeg:
Silungile, manje sizolanda iskripthi bese siyinika izimvume zokwenza:
Manje, ukuze sisebenze nayo, okungukuthi, ukulanda umsindo wevidiyo ye-YouTube, kusobala ukuthi sidinga ukwazi ukuthi iyiphi ividiyo ye-YouTube engeyona? Thatha ngokwesibonelo le vidiyo: Isikhathi sendaba, Nightwish
Sisebenzisa iskripthi futhi njengepharamitha yokuqala sidlulisa i-URL yevidiyo:
Maphakathi nenqubo, izosibuza igama esifuna ukulinika ifayela, unayo ukuba igama NGAPHANDLE kwezikhala.
Ngendlela, uma ikukhombisa noma yiliphi iphutha elingakwazi (iskripthi) ukuthola i-youtube-dl ku / usr / local / bin / youtube-dl, kufanele wenze isixhumanisi esingokomfanekiso esisuka endleleni ye-youtube-dl yakho uye lapho ufika khona khombisa, okungukuthi:
Le ndlela iyazenzakalela ukukhipha umsindo, yize kunjalo, ungahlala uzilayishe ividiyo bese ukhipha umsindo ngohlelo lwakho lokusebenza oluthandayo. Yize lesi sixazululo singathuthukiswa, ngokwesibonelo, ukusekelwa kwezikhala ezisegameni (okungalungiswa ngezingcaphuno kuskripthi), kuba cishe Isiguquli se-YouTube ku-MP3 Njengabaningi abaku-inthanethi beWindows, kunjalo, sisebenzisa okwethu kusuka esigungwini, kuzodla okuncane, sizokwazi kahle ukuthi kusebenza kanjani, njll.
Ngiyabonga kakhulu ku- ubhabha for the iskripthi.
Ngiyethemba kuzoba wusizo kuwe.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » Landa ividiyo ye-YouTube bese ukhipha umsindo ngokuzenzekelayo
Kulula kakhulu ukusebenzisa i-JDownloader noma i-DownloadHelper (yeFirefox eyokugcina) ...
Ngisebenzisa i-Download Helper, kepha kuhle ngaso sonke isikhathi ukwazi ukuthi kunamathuluzi amaningi kunokusebenzisa okukodwa.
Angizidingi izinhlelo zokulanda kusuka ku-youtube.
Ngikwenza kanjena nje:
Ngisebenzisa isidlali se-YouTube HTML5, ngichofoza kwesokudla kuvidiyo.
-Ngikhetha «Hlola isakhi»
-Ngaphakathi kwesihlahla se-HTML, ngikhetha umaki lapho kutholakala khona ividiyo edlalayo, bese ngiya endaweni ye- "src".
-Kukhona ukuxhumana okuqondile kufayela levidiyo. Ngimane ngikopishe leso sixhumanisi bese ngiyasivula kwenye ithebhu.
-Ngicindezela u-Ctrl + S (ugcine njenge) bese ukhetha ifolda lapho ngifuna ukulanda khona ividiyo. Noma unganamathisela leso sixhumanisi eduze komyalo we-wget, esisebenzisa i-console kuwo. futhi Voilá.
Ngokuyinhloko yilokho okwenziwa yi-youtube-dl, futhi kudlulisa i-html ukuthola isihloko sevidiyo bese ubeka leso sihloko njengegama lefayela.
Siyabonga ngomlingani oshiwo.
Mayelana nokuncomeka kakhulu, usilele, yi-xD enhle kakhulu ngoba ngiyenze ngenhloso yokukhombisa i-GNU / linuxeros entsha engiyibuyise kabusha kusuka kwiWindowscrismo ukuthi ngemizuzu embalwa nje yekhibhodi singakwazi ukuphatha u-A " Uhlelo oluncane "lwezidingo zethu ezithile ngaphandle kokulayisha izinhlelo zethu ezisinda kakhulu ukuze sisebenzise u-10% wezinketho zalo, ngoba nangu u-10% kuphela esizowusebenzisa.
Njengoba uphawula ngayo, ngizoyihlela ukuze ngiyinike igama ngezikhala, okungenza ngibe namahloni ngokungaqondakali 😛
Enye inothi elincane, uma ufaka iskripthi kufolda ye / usr / local / bin bese usinika izimvume zokwenza lokho lapho, kuzokwanela ukufaka "ikheli" le-terminal ngaphandle kokuya kufolda yeskripthi bese usethula nge ./ Ukuze kube lula, vele ulilayishe ngqo kusayithi lapho sifuna khona.
Mngani, indlela ethokozisayo yokukwenza, ngaso sonke isikhathi kuhle ukuba nezinye izindlela eziningi zokwenza okuthile, kepha, njengoba kukhonjisiwe ngenhla, kulula kakhulu ukukwenza nge-videodownloadhelper (isandiso se-firefox), kulula ukuyifaka nokukhipha I-audio nayo isebenzisa i-ffmpeg.
Bheka uma ufuna:
Ingabe nawe uthanda Nightwish? Bengimlalele eminyakeni embalwa eyedlule ... sengivele ngilahlekelwe umkhondo wakhe ...
Ngokunjalo, umsindo awu-RE mubi kuleyo vidiyo.
Ngaphandle kwalokho, umnikelo omkhulu!
I-Nightwish selokhu uTarja ahamba yashintsha kakhulu, no-Anette kwakungafani ... manje bashintshe uFlorr (noma ngabe yini ebhaliwe), sizobona 🙂
Mayelana nomsindo… kahle, kuyisibonelo sokuthi ngokuthembeka, ngifune ividiyo ne-voila, angizange ngibheke nekhwalithi yomsindo hahaha
Ngisebenzisa i-clipgrab, uyinika ikheli levidiyo ofuna ukuyilanda ku-YouTube futhi ikunikeza izinketho zokuthi ufuna yiphi ifomethi, kokubili umsindo nevidiyo. Ngicabanga ukuthi akuyona inkimbinkimbi.
Izolo bengizama ukuyisebenzisa, kepha cishe zonke izixhumanisi ebengizama ukuziguqula, ingikhombise iphutha elilandelayo:
Kutholwe amasiginesha abetheliwe.
IPHUTHA: ayikwazi ukulanda ividiyo
Ngigcine ukusebenzisa enye yamawebhusayithi amaningi aguqula izixhumanisi ze-YouTube zibe yi-MP3. Isihawu.
Izinhlobo zakamuva ze-youtube-dl zinenketho yokukhipha umsindo zisebenzisa amapharamitha alandelayo:
ifomethi ye-youtube-dl -x -audio-mp3
ngesinye isikhathi kwakukhona ukuphela okwathi:
»Uhlobo lwe-Ffmpeg 0.8.9-6: 0.8.9-0ubuntu0.13.10.1, Copyright (c) 2000-2013 abathuthukisi beLibav abakhe ngoNovemba 9 2013 19:09:46 nge-gcc 4.8.1
*** LOLU HLELO LUHLEHLISIWE ***
Lolu hlelo luhlinzekelwa ukuhambisana kuphela futhi luzosuswa ekukhishweni okuzayo. Sicela usebenzise i-avconv esikhundleni salokho. »
Futhi ngigcina nginefayela le-mega elingu-0 ... ngenjabulo njalo
IMinitube nayo inhle futhi inethezekile
Sawubona, ngenze konke nge-zypper ngoba ngine-OpenSuse futhi ngaleso sikhathi ngilande isibonelo, ngaphandle kwenkinga, kepha manje angazi ukuthi iskripthi siyini futhi ngithola lokhu: bash: ./yoump3: Ifayela noma umkhombandlela wenza ayikho.
uma wazi ukuthi i-youtube-dl uqobo inokukhetha ukukhipha umsindo, akunjalo?
$ youtube-dl –usizo
Izinketho zokwenza okuthunyelwe:
-x, –extract-audio iguqula amafayela evidiyo abe amafayela alalelwayo kuphela (idinga
i-ffmpeg noma i-avconv ne-ffprobe noma i-avprobe)
-Audio-format IFOMU "ehamba phambili", "aac", "vorbis", "mp3", "m4a", "opus", noma
"Wav"; okuhle ngokwakhona
-Ikhwalithi yekhwalithi yomsindo ffmpeg / avconv imininingwane yekhwalithi yomsindo, faka
inani eliphakathi kuka-0 (okungcono) no-9 (okubi kakhulu) le-VBR
noma i-bitrate ethile efana ne-128K (okuzenzakalelayo 5)
–Recode-video FORMAT Faka ividiyo kwenye ifomethi uma kudingeka
(okwamanje kuyasekelwa: mp4 | flv | ogg | webm)
-k, –keep-video igcina ifayela levidiyo kwidiski ngemuva kokuthunyelwe-
ukucubungula; ividiyo isulwa ngokuzenzakalela
Angicabangi ukuthi ngidinga iskripthi esehlukile.
okuhle, bengilokhu ngifuna into enjengale izinsuku!
$ youtube-dl –extract-audio (noma -x nayo iyasebenza) –audio-format mp3 (vorbis also or mp4 and others) -audio-quality 129k (or 192 320 64 32) URLdelvideo
Kuphela ngaphandle kwesidingo sanoma yimuphi umbhalo wangaphandle owenza okufanayo.
Isikripthi esihle kakhulu, siwusizo kakhulu, sinembile futhi silula.
Nasi isixhumanisi esine-script efanayo futhi ethe xaxa oyilandayo bese unikeza inketho yokuyiguqula ibe yifomethi ye-mp3 neye-3gp.
othile uyazi ukuthi kungani ngithola lokhu ekugcineni:
Lolu hlelo luhlinzekelwa ukuhambisana kuphela futhi luzosuswa ekukhishweni okuzayo. Sicela usebenzise i-avconv esikhundleni salokho.
* 4Hlw2xHOXAI *: Alikho lelo fayela noma umkhombandlela
rm: ayikwazi ukususa "* 4Hlw2xHOXAI *": Ifayela noma umkhombandlela awukho
Amayunithi: Isiguquli samayunithi (amamitha, amalitha, amasentimitha, amadigri, njll.) Esigungwini